RASMI: Zidane oo xaqiijiyay in mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Real Madrid uu dhaawac ku seegayo kulanka Eibar – Gool FM
(Madrid) 08 Nof 2019. Zidane ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah xiddigihiisa ugu muhiim uu dhaawac kaga maqnaan doono kulanka horyaalka La Liga ay habeen dambe booqan doonaan kooxda Eibar.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ku dhawaaqay in Marcelo uu seegi doono ciyaarta habeen dambe ee Eibar, sababa la xiriira dhaawac soo gaaray inta lagu gudi jiray kulankii tartanka Champions League ay kooxda Galatasaray ku xaaqeen 6-0.
Daafaca bidix ee reer Brazil ayaa maanta oo Jimcaha ah maray baaritaano dhowr ah, waxaana lagu xaqiijiyay inay muhiim tahay inuusan ciyaarin kulanka soo aadan ee Eibar, cabsi laga qabo inuu ku sii darro dhaawaca ka soo gaaray dhanka muruqa.
Haddaba Zidane ayaa ku xaqiijiyay maqnaanshiyaha Marcelo, kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marcelo ma ciyaari doono kulanka Eibar”.
“Baadhitaanadii caafimaad uu maray ayaa waxay muujiyeen inuu murqo xanuun qabo”.
“Dhaawaca Marcelo ma ahan mid culus, laakiin qeyb kama noqon doono safarkeena”.